10 Fihenan'ny tanàna tsara indrindra any Eoropa | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Fihenan'ny tanàna tsara indrindra any Eoropa
Nandeha lamasinina, Train Travel Austria, Train Travel Belzika, Train Travel Repoblika Tseky, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Train Travel Holland, Fiaran-dalamby Hongria, Fiaran-dalamby any Italia, Train Travel The Netherlands, Torohevitra toro-lalana amin'ny lamasinina, Travel Europe
(Last Nohavaozina: 11/04/2021)
Mampahatsiahy antsika foana ny momba an'i Hollywood sy ny fianakavian'ny firenena taloha. Noho izany, fihenam-bohitra iray ao amin'ny tanànan'ny iray mahavariana any Eoropa dia momba ny zavatra mahafinaritra eo amin'ny fiainana hatrany. Sakafo tsara, kolontsaina, ary ny tantara miaraka amin'ny kofehy manokana sy ny maritrano izay manaitra ny saintsika, vitsivitsy monja amin'ny zavatra mahatonga an'i Eoropa ho nofy.
Avy amin'ny morontsirak'i Nice ka mankany amin'ny lanitra manga any Vienna, ny 10 Ny faran'ny tanàna tsara indrindra any Eropa dia mihoatra ny fanantenanao lehibe indrindra.
Ny fitsangatsanganana lamasinina no làlana mamboly aody mba hitety any Eropa. Ity lahatsoratra ity dia nosoratana mba hampianatra momba Train Travel ny Save A Train, Train mora indrindra Tickets Website In The World.
1. Fihenan'ny tanàna tsara indrindra any Eoropa: Vienna, Aotrisy
Raha natokana ho an'i Sachertorte ihany, ny torte-sôkôla mahazatra, tokony hoeritreretinao tokoa ny fahalalanao an'i Vienna noho ny fahatapahan'ny tanàna ao Eropa. Afovoan'ny herinandro na faran'ny herinandro lava, Manome fijery mahafinaritra i Vienna mba hankasitrahana sy ny fomba fijery ao an-tanàna izay mety hiainanao.
Atombohy amin'ny Kahlenberg izay ahitanao hatramin'ny farany ny Carpathians any Slowakia. Avy eo dia manohy any amin'ny nosy artifolikan'i Danube haka sary sy mankany afovoan-tanànan'i Vienna mankany amin'ny kianjan'i Franziskanerplatz mba hisotro rano kafe Viennese amin'ny karatra. Akatona ny andro miaraka amin'ny akoho ao amin'ny lanjan'ny lanitra Das Loft ary mifangaro amin'ireo mponina eo an-toerana.
Ireto dia zavatra vitsivitsy fotsiny tokony hatao any Vienna raha te handany ny trano fialan-tsasatra any Vienna ianao tahaka ny vehivavy Vienne marina.
2. Colmar, Frantsa
Eo anelanelan'i Soisa sy Alemana, akaikin'ny faritra tsara tarehy Rhine any Frantsa, Colmar dia tanàna iray manintona sy mahafinaritra. Izany no antony an'ity tanàna kely ity dia iray amin'ireo tanàna tsara indrindra mamotika ny faritra any Eropa. Misaotra ny habeny kely sy manankarena izy ireo 1000 Tantaran'ny eoropeana izay manampy amin'ny rivo-piainana majika, tena hitia amin'ny voalohany ianao ary hiverina hijanona ela kokoa.
Amin'ny fotoana hahatongavanao ao Colmar dia ho tsapanao avy hatrany fa lasa niditra amin'ny angano zaza ianao. Ny làlana tsara amin'ny fandaniana ny tanànanao any Eropa dia hivezivezy eny an-dalambe mankany Venise kely, ajanony a vera divay, ny toetra manokana Alsace.
Colmar dia tonga lafatra amin'ny fialan-tsasatra amin'ny tanàna Krismasy ary tena tsara tarehy mandritra ny faran'ny herinandro lohataona.
Paris mankany Colmar amin'ny lamasinina
Zurich mankany Colmar amin'ny fiaran-dalamby
Stuttgart mankany Colmar amin'ny Train
Luxembourg to Colmar by Train
3. Fihenan'ny tanàna tsara indrindra any Eoropa: Venice, Italia
Bridges, trano tsy mahazatra sy maro loko, fofona pizza sy Aperol, ataovy Venise a toerana nofinofy ho an'ny fahatapahan'ny tanàna any Eropa. Ny habe keliny, tranombakoka, ary ny fahitana dia hitazona anao foana mandritra ny faran'ny herinandro fohy sy fohy. Misy foana ny piazza kely manodidina ny zorony, aiza no hipetrahanao any aoriana?, manana cappuccino sy panini, na mitondra ny tenanao amin'ny pizza nandoro eo amin'ny fatana taloha.
Raha mikasa ny hanao pop nandritra ny faran'ny herinandro ianao, Ny nosin'i Burano sy Murano dia misy sambo kely fotsiny.
Milan ho any Venice amin'ny lamasinina
Padua to Venice amin'ny lamasinina
Bologna mankany Venice amin'ny lamasinina
Roma mankany Venice amin'ny lamasinina
4. Fihenan'ny tanàna tsara indrindra any Eoropa: Nice, Frantsa
Tsy misy miala sasatra afa-tsy ny dia haingana ho any Riviera frantsay nandritry ny faran'ny herinandro. Beautiful Nice sy ny morontsiraka misy azy dia toerana mahafinaritra amin'ny fivahinianana tanàna tsy hay hadinoina any Eropa.
Cote D'Azur no toerana amoron-dranomasina tsara indrindra any Nice sy La Tour Bellanda tsy tokony hoheverina ho an'ireo tahaka ny carte poste fomba fijery sy filentehan'ny masoandro. Ny fitsangatsanganana tanàna iray any Nice dia mikasika ny fiainana tsara sy fisakafoana mahafinaritra. Noho izany, ny faran'ny herinandro any Nice dia hahatsapa ho toy ny fahatsaram-boninahitra ianao.
Lyon mankany Nice amin'ny lamasinina
Paris mankany Nice amin'ny lamasinina
Cannes mankany Paris amin'ny lamasinina
Cannes to Lyon amin'ny lamasinina
Ny zavatra voalohany tonga ao an-tsaina rehefa misy mieritreritra ny fahatapahan'ny tanàna ao Amsterdam dia ny faritry ny jiro mena, mitaingina bisikileta, sy lakandrano. fa, ity tanàna eoropeana kely ity dia manana zavatra maro hafa atolotra.
Amin'ny fotoam-pahavakian'i Amsterdam mamirapiratra amin'ny loko maro loko ary na aiza na aiza mihodina ianao dia toy ny carte poste. lakandrano, sambo, bisikileta, sy voninkazo miandry ny handokoana ny rakitsaryo. Atombohy amin'ny tranom-bakoka Tulip avy eo dia mandehana mankany Jordaan, maze an'ny kafe sy boutique kely eo an-toerana, na valan-javaboary Oost sy Rembrandt ho an'ny a piknik sy miala voly.
Brussels mankany Amsterdam amin'ny lamasinina
London mankany Amsterdam amin'ny fiaran-dalamby
Berlin mankany Amsterdam amin'ny lamasinina
Paris mankany Amsterdam amin'ny lamasinina
6. Fihenan'ny tanàna tsara indrindra any Eoropa: Cinque Terre, Italia
Cinque Terre dia vondrona iray 5 maro loko sy tanàna mahafinaritra ary io dia mety ho iray amin'ireo fihenan'ny tanàna tsara indrindra azonao amin'ny fiainanao. Amin'ny fararano sy ny ririnina, Cinque Terre dia hatsarana fatoriana, fa amin'ny fahavaratra dia mampihomehy toy ny tanàna any Eropa izany. Ny lehibe indrindra tombony amin'ny Cinque Terre raha oharina amin'ireo tanàna eoropeana dia afaka mandeha mora sy mitsidika ianao 5 tanàna any ambany latsaky 3 andro. Ary noho izany, Ny fitsangatsanganana amin'ny lamasinina ao Cinque Terre dia mora sy mahazo aina ary afaka mandeha any amin'ny tanàna kely iray izay kely noho ny 20 minitra.
Mipetraka eo amin'ny hantsam-bato sy manenika ny ranomasina amin'ny torapasika tsara tarehy, Cinque Terre dia mampitolagaga. Ary, be ny kafe, trano fisakafoanana, hevitra, ary tongotra lavitra lalana mba hifanaraka amin'ny tsirony rehetra. Noho izany, raha te hiala sasatra amin'ny vera iray ao amin'ny voalobola ao an-toerana na mahazo manao adventurous, dia mety ho anao ny fiatoana tanàna ao Cinque Terre.
La Spezia to Manarola amin'ny lamasinina
Riomaggiore mankany Manarola amin'ny lamasinina
Sarzana to Manarola amin'ny lamasinina
Levanto mankany Manarola amin'ny lamasinina
7. Prague, Repoblika Tcheky
Zaridaina, zaridaina maitso, fomba fijery mahavariana, ary ny alàlana hivezivezy ao, mahatonga an'i Prague ho vaky ny tanàna tonga lafatra any Eropa. Ny Prague dia fonenana mahafinaritra, tantara, tsena eo an-toerana, ary kafe izay ahafahanao manangona kafe sy mofomamy mba handehanana ary maka sary amin'ny iray amin'ireo valan-javaboahariny marobe. koa, Betsaka ny toerana nafenina sy toerana be dia be hitrandrahana ary hisorohana ny andian'olona mpizahatany.
Ny Prague dia toerana fitsangantsanganana malaza ao Eropa, na dia afaka mibaiko be dia be mandritra ny taona. fa, tena mendrika ny fitsidihana mandritra ny faran'ny herinandro fohy. Fotoana miala amin'ny lamasinina ianao, dia ho resy miaraka amin'ny mahafatifaty ianao ary tsara tarehy tanàna.
8. Fihenan'ny tanàna tsara indrindra any Eoropa: Brussels, Belzika
Raha manana nify mamy, tena hanana fialan-tsasatra mahafinaritra amin'ny tanàna ianao any Brussels. Brussels dia manana be dia be ny fizarana sy hampisehoana anao, toy ny kanto indrindra sôkôla malaza eran-tany sy waffles. Ankoatry ny, mihoatra ny 100 tranom-bakoka miandry anao ao Brussels. Rehefa avy mitsidika ireo izay tsara indrindra ianao dia afaka mijoroa Danseart hisakafo hohanina amin'ny trano fisakafoanana tsara indrindra. Ny vatosoa iray hafa any Bruxelles dia ilay toerana mahafinaritra Sainte-Catherine sy Chatelain kanto sy kolontsaina.
Brussels dia ho faly amin'ny fampiantranoana anao amin'ny fialantsasatra fohy mandritra ny faran'ny herinandro na maharitra. Izy io dia tanàna kosmopolitan manana hatsarana sy fomba izay azon'ny rehetra ampifandraisina.
Luxembourg mankany Brussels amin'ny lamasinina
Antwerp mankany Brussels amin'ny lamasinina
Amsterdam mankany Brussels amin'ny lamasinina
Paris mankany Brussels amin'ny lamasinina
9. Hamburg, Alemaina
Ny tanàna faharoa lehibe indrindra any Alemaina dia iray amin'ireo toerana tsara indrindra amin'ny fitsangatsanganana tanàna any Eropa. Hamburg no fonenan'ny seranan-tsambo lehibe indrindra ao amin'ny firenena sy farihy Inner sy Outer Alster, izay ahafahanao mankafy a sidina sambo mahafinaritra.
Planten un Blomen dia zaridaina botanika izay misy sary sy toerana mahafinaritra sary. Noho izany, manamboatra fakan-tsarimihetsika tsara kokoa ianao ary miomàna amin'ny tifitra vitsivitsy mba zarao amin'ny fialantsasatra mahavariana any Hamburg.
Hamburg mankany Copenhagen amin'ny lamasinina
Zurich mankany Hamburg amin'ny lamasinina
Rotterdam mankany Hamburg amin'ny lamasinina
10. Fihenan'ny tanàna tsara indrindra any Eoropa: Budapest, Hongria
Ny iray amin'ireo zavatra tsara indrindra tokony hatao ao Budapest dia ny mandray sambo mandeha amin'ny renirano Danube. Ny fomba tsara indrindra hijerena ny tanàna sy ny maritrano any Budapest dia amin'ny alàlan'ny sambo. Miaraka amin'ny hetsika ivelany sy anatiny, ny renivohitra Hongria dia manana mari-pahaizana avo indrindra 10 fihenam-bidy tsara indrindra any Eoropa.
Mikaroka ny tetezana, mitsidika fandroana hafanana nentim-paharazana, ary matsiro ny nahandro Hongroana dia zavatra tsy maintsy ataonao hahatsapa ho tahaka ny any an-toerana ao Budapest. koa, Aza adino ny mitsidika an'i Matthias Fiangonana, Baiko mpanjono, sy ny Parlemanta ho an'ny filentehan'ny masoandro mody.
eto amin'ny Save A Train, dia ho faly izahay hanampy anao hahita ny tapakila fiaran-dalamby mora indrindra amin'ireo fialantsasatra mahafinaritra ho an'ny tanàna kasainao haleha!
Te-hampiditra am-peo bilaogy “10 City Best Breaks any Europe” ve ianao?? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-city-breaks-europe%2F%3Flang%3Dmg Nyawang– (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, ho hitanao ny zotram-piaranay malaza indrindra - https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, ary afaka hanova ny / de ny / en na / en sy ny maro hafa fiteny.
citybreak citybreakeurope citybreaks summertraintravel TravelBudapest travelhamburg TravelPrague
Train Travel Austria, Train Travel China, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Fiaran-dalamby any Italia, Fiaran-dalamby Portugal, Fiaran-dalamby Spain, Fiaran-dalamby Switzerland, Travel Europe
5 Best Voajanahary Loharano Mafana Any Eoropa
Nandeha lamasinina, Train Travel Austria, Fiaran-dalamby Britain, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Hongria, Fiaran-dalamby any Italia
12 Efitra fandosirana tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao
12 Ireo mpiara-monina akaiky indrindra any Eropa
10 Toeran-kaleha lehibe miaraka amin'ny sahan'ny Tenisy